‘The Top 10 Couples’ စာရင်းမှာ ပါဝင်လာခဲ့တဲ့ ထိုင်းဇာတ်လမ်းစုံတွဲများ | News Bar Myanmar
‘The Top 10 Couples’ စာရင်းမှာ ပါဝင်လာခဲ့တဲ့ ထိုင်းဇာတ်လမ်းစုံတွဲများ
၂၀၂၀ ခုနှစ် ‘The Top 10 Couples’ အတွက် Dim Sum Entertainment မှ စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပြီး ဒီစာရင်းကို ထိုင်းဇာတ်လမ်းစုံတွဲတွေက အသီးသီးနေရာယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။
1. Pope Thanawat & Bella Ranee
စာရင်းရဲ့ထိပ်ဆုံး နံပါတ် ၁ နေရာကို အပိုင်သိမ်းထားကြတဲ့အတွဲကတော့ Pope Thanawat နဲ့ Bella Ranee ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Pope နဲ့ Bella ကတော့ အတွဲညီတဲ့သရုပ်ဆောင်တွေအဖြစ် အားလုံးကလက်ခံထားကြပြီး “Roy Leh Marnya” နဲ့ “Buppesunnivas” မှာ အတွဲလိုက်အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပြသခဲ့ပါတယ်။
2. Mark Prin & Mew Nittha
Mark Prin နဲ့ Mew Nittha တို့ရဲ့အတွဲညီချက်ကိုတော့ “My Husband in Law” ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ကြည့်ရှုသူတွေမြင်တွေ့ခဲ့ရမှာပါ။ အလှပဆုံးရှုခင်းတွေနဲ့ ဟာသနှောပြီးကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်ကို မြင်သာခံစားမိအောင် ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့လို့ နံပါတ် ၂ နေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။ ဒီထိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲကြောင့်ပဲ Mark နဲ့ Nittha ဟာ ဆုတွေ ရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။
3. Nadech Kugimiya & Yaya Urassaya
ဇာတ်လမ်းစုံတွဲလို့ပြောလို့ရသလို တကယ့်လက်တွေ့မှာလည်း ချစ်သူတွေဖြစ်တဲ့ Nadech Kugimiya နဲ့ Yaya Urassaya တို့ကတော့ “The Top 10 Couples” စာရင်းမှာ နံပါတ် ၃ နေရာမှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အကောင်းဆုံးအတွဲလိုက်သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကို “The Crown Princess” နဲ့ပြသထားနိုင်ခဲ့တာမို့လို့ ဒီစာရင်းထဲကို ပါဝင်လာခဲ့တာပါ။
4. James Jirayu & Ice Preechaya
ထိပ်တန်း ၁၀ ယောက်စာရင်းဝင်လာခဲ့တဲ့ နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းစုံတွဲကတော့ James Jirayu နဲ့ Ice Preechaya ပဲဲဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်​ယောက်စလုံးဟာ သရုပ်ဆောင်ကောင်းတဲ့အနုပညာရှင်တွေဖြစ်တာကြောင့် “Payakorn Sorn Ruk” နဲ့ ကြည့်ရှုသူတွေကို နှစ်ခြိုက်စေခဲ့ပြီး ဇာတ်လမ်းစုံတွဲအဖြစ် အားလုံးက ကျေနပ်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
5. Mario Maurer & Kimmy Kimberley
နံပါတ် ၅ နေရာကို အပိုင်သိမ်းထားတဲ့ အတွဲကတော့ Mario Maurer နဲ့ Kimmy Kimberley တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးလည်းသိကြတဲ့အတိုင်း ဒီစုံတွဲကတော့ ဘယ်သူနဲ့ရိုက်ကူးပါစေ ဇာတ်လမ်းကိုအကောင်းဆုံးပုံဖော်နိုင်တာကြောင့် နာမည်ကြီးပါတယ်။ ဟာသဇာတ်လမ်းတွဲ “Thong Rek Mor Yah Tah Chalong” မှာ အတွဲညီညီသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် ထိပ်တန်းစာရင်းဝင်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
6. Sunny Suwanmethanont, Sky Wongravee & Mai Davika
“The Top 10 Couples” မှာ အတွဲနှစ်တွဲအဖြစ် ပါဝင်လာခဲ့သူတွေကတော့ Sunny, Sky နဲ့ Mai တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ “Love Ambulance” ဇာတ်လမ်းထဲက Sunny Suwanmethanont နဲ့ Mai Davika တို့ရဲ့ အတွဲပုံစံအပြင် Sky Wongravee နဲ့ Mai Davika ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့အတွဲလေးကိုပါ ကြည့်ရှုသူတွေ အထူးကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ကြပါတယ်။
7. Tor Thanapob & Fern Nopjira
ကြည့်ရှုသူတွေအသည်းစွဲဲဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ Tor Thanapob နဲ့ Fern Nopjira တို့အတွဲကတော့ နံပါတ် ၇မှာ ရှိနေပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်အတူတူသရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ “Huajai Sila” ဟာ တော်တော်လူကြိုက်များခဲ့ပြီး ဇာတ်လမ်းထဲက Tor နဲ့ Fern တို့ရဲ့ ချစ်သူစုံတွဲပုံကို အားလုံးက သဘောကျခဲ့ရတာပါ။
9. Dan Worrawech & Baifern Pimchanok
“The Sand Princess” ဇာတ်လမ်းထဲက Dan Worrawech နဲ့ Baifern Pimchanok တို့ရဲ့ အတွဲလေးကို ကြည့်ဖူးကြမှာပါ။ အတွဲညီညီနဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတွေအဖြစ် အကောင်းဆုံး ရိုက်ကူးပြသခဲ့တာကြောင့် စာရင်းရဲ့ နံပါတ် ၉ နေရာမှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။
Next “Playing with fire” နဲ့ "Whistle” သီချင်းနှစ်ပုဒ်လုံး 600 million views ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ BLACKPINK »
Previous « ဇာတ်လမ်းသစ်ထဲမှာ အတူတူပြန်တွေ့ရဖို့အလားအလာရှိနေတဲ့ “Love and Redemption” ထဲက အဓိကဇာတ်ဆောင် ၂ယောက်